(5)တန်း မှစလို့ ကွန်ပျူတာဘာသာရပ်ပြဌာန်းတော့မယ်ဆိုပဲ(2012)မှာတဲ့။ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Education » (5)တန်း မှစလို့ ကွန်ပျူတာဘာသာရပ်ပြဌာန်းတော့မယ်ဆိုပဲ(2012)မှာတဲ့။
(5)တန်း မှစလို့ ကွန်ပျူတာဘာသာရပ်ပြဌာန်းတော့မယ်ဆိုပဲ(2012)မှာတဲ့။
Posted by ba gyi on Oct 4, 2011 in Education, Myanma News | 18 comments
ယ္ခင်အပတ်က ကျွန်တော့ post လေးကိုဝိုင်းပြီး comment ပေးကြတဲ့ရွာသားများနှင့်တစ်ကွ၊ အားလုးံသောရွာသားအပေါင်းနှင့် Mandalay Gazette ရဲ့ ပရိတ်သတ်ကြီး အား လုံးကိုကျေးဇူးအထူးတင်ပါသည်၊အဲသည် post မှာ comment ပေးခဲ့တဲ့ kai ရဲ့ဆွေးနွေး ချက်မှာပါတဲ့ အချက်တွေပေါ်မူတည်ပြီး( မြစ်ဆုံကိစ္စ နှင့်ပါတ်သက်ပြီးသူကြီး သို့တင်ပြခြင်း)ဆိုတဲ့နောက် post မှာပိုပြီး ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်ထပ်ဆွေးနွေးတာ ဖတ်ရလို့အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်သလို ဒီကိစ္စတွေရဲ့အဓီကလိုအပ်ချက်တွေအပေါ် ပြောင်းလဲ နိုင်မည့် အ ပြောင်း အလဲ(အစ)လို့ပြောရမလား အဲသည်သတင်းလေး ကိုကျွန်တော်ယ္ခုတင်လိုက်ပြန်ပါပြီ၊ ဖတ် ပြီးရွာသားအပေါင်းဆွေးနွေးပေးကြပါအုန်းခင်ဗျား————၊ သည်သတင်းကို(20010) နှစ်ကုန်ပိုင်းလောက်ကစခဲ့တာပါ၊ ရန်ကုန် မြို့မကျောင်းမှ ဆရာမ တစ်ဦး၏ ပါးစပ်သတင်းပါ ရန်ကုန် မှာရှိတဲ့ကျောင်ကြီး (10)ကျောင်း စရွေး ထုတ်ပြီးစင်္ကာပူနဲ့အာရှမှာ တိုးတက်နေတဲ့ အထက်တန်းကျောင်းတွေ မှာသင်တဲ့ သင်ရိုးညွှန်းတမ်း တွေအ တိုင်းအဲသည်ကျောင်းတွေမှာစမ်းသပ်သင်တော့မယ်ဆိုတဲ့သတင်းပါ၊ ဒါပေမည့်—-(2011) အထိတော့ဖြစ်မလာသေးပါဘူး- မနေ့ကတော့ အဲသည်ဆရာမထံမှပဲ ထပ်ကြား ရတာပါ၊ သေခြာတဲ့သတင်းလို့ပြောပါတယ်၊ အထက်တန်း ကျောင်း တိုင်းမှာ (5)တန်း မှစပြီး ကွန်ပျူတာသင်ရိုးညွှန်းတန်းပြဌာန်းမယ်၊ Multi Media Room မှာယနေ့ဟန် ပြနေသလိုမျိုးမဟုတ်ပဲ၊ ဘာသာရပ်တစ်ခုအ ဖြစ်သင်ရမှာ လို့ပြော လာ ပြန်တယ် —– —- ၊ ဒါသာအမှန်ဆိုရင်တော့ကြိုဆိုပါတယ်၊ နောက်ထပ် နည်းပညာ ဖြစ်စေတဲ့ အခြေခံဘာသာရပ်တွေပါပြဌာန်းသင့်တယ်လို့ထင်ပါတယ်၊ ကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံဟာ လွတ်လပ် ရေးရပြီး မှ နောက်–နှစ်၊ အနည်းငယ်အထီ ပညာရေးဟာအရှေ့တောင်အာရှမှာ ခေတ်နောက်မကျခဲ့ပါဘူး၊ တစ်ကယ်ပြောရရင် Poly technic ဆိုတာ ၊ (8)တန်း အောင် ပြီး တက်လို့ရတဲ့ ဘောင်ထရီ စက်မှုအထက်တန်းကျောင်း/ မြန်မာ နိုင်ငံမှာ စခဲ့ပါတယ်၊ ခုတော့——-ပျက်သလောက်ပါပဲ။ (10)တန်းအောင်ပြီး နည်းပညာကျောင်းတွေတော ယ္ခု့ နေရာတစ်ကာမှာဖွင့်ထားပါတယ်၊ သင်ထောက်ကူ ပစ္စည်း တွေပဲ လိုလို့လား၊ သင်ရိုးတွေပဲလိုလို့လား၊သင်ကြား သူတွေပဲ ညံ့လို့လား၊ ၀ါသနာမပါပဲ မိဘဇွတ်တက်ခိုင်းလို့တက်ရတဲ့ကျောင်းသားတွေများနေလို့လား၊ မသိပါ၊ နည်းပညာပိုင်းမှာ တိုးတက် တီထွင်နိုင်တဲ့သူရယ်လို့ ကျုပ်တို့ သတင်းခေါင်း ကြီးပိုင်းတွေမှာတွေ့မလာသေးပါဘူး။ တိုင်းပြည်မှာ နည်းပညာချို့တဲ့ခဲ့လို့- လျှပ်စစ်ပိုင်း၊လောင်စာပိုင်း၊တွင်းထွက်နဲ့ ဓါတ်သထ္တုပိုင်း၊ ဆေးပညာတီထွင်မှု လူသုံးကုန်နဲ့ ဓါတုပစ္စည်း အစစအရာရာ သူများကိုအားကိုးနေကြရတာပါ၊ သူမျာနိုင်ငံတွေကဖေါ်နည်းကားလုပ်ပြီးအကျိုးခံစား၊၀ပြီးအီလာလို့အဲသည်ဖော်နည်းကား တွေကြောင့်ပါ ပတ်ဝန်းကျင်ဂေဟစံနစ်ထိခိုက်တယ်လို့၊ အန္တရာယ်ရှိတယ်လို့၊တွေ့လာတဲ့အချိန်ကျမှ ကျုပ်တို့ကအဲသည်နည်းကိုလိုက်လုပ်ဖို့ဖြစ်လာတာတွေ — -(ဒါတောင်ကိုယ့်ဟာကိုယ်) မလုပ်နိုင်သေးလို့ သူများထိုးအပ်၊ အမြတ်ပေးရသေး ဆိုတဲ့အခြေအနေတွေဟာ အင်မတန်ရင်နာစရာကောင်းပါတယ် ။ ရှေ့ကပြေးပြီးပေါင်ကျိုးခဲ့တာကိုး၊ ဒါ့ကြောင့် လူ့ အ ကျိုးပြု နည်းပညာနဲ့ပါတ်သက်တဲ့ဘယ်အခြေခံပညာကိုမဆို အထက်တန်းကျောင်းတွေမှာစပြီးသန္ဓေပညာရပ်အဖြစ်သင်ကြားမယ်ဆိုရင်ခပ်မြန်မြန်လုပ်ဘို့တိုက်တွန်းရင်း- ၀ိုင်းဝန်းကာအကြံပြုကြပါခင်းဗျား။(ရှောင်ရန်/ဆောင်ရန်များပါအကြံပြုကြပါရန်)။
သတင်းကတောကြေငြာနေတာပဲ MRTV ကသတင်းမှာကြည်လိုက်ရတယ်အဲဒီလိုပြောတာကို ဟုတ်မဟုတ်တောသိပါဘူး
အိမ်မှာEC နဲကျောင်းပြီးထားတဲညီမတစ်ယောက်ရှိတယ် အိမ်က ထမင်းပေါင်းအိုးတို့မီးပလပ်တိုပျက်ရင် တခြားသူကပဲကြည်ပေးပြင်ပေးတယ် သူကကိုင်တောင်မကြည့်ဘူး အဲလိုစိတ်ဝင်စားတဲသူများကိုမွေးထုတ်ပေးနေတဲ နည်ပညာကျောင်တော်ကြီးတွေကို ဂုဏ်ယူစွာနဲမြန်မာပြည်မှာတွေ့နိုင်ပါပြီ…………….
“နားထောင်မနေပါနဲ့ ဟုတ်တာလည်း မဟုတ်ဘူး” တဲ့
ကျွန်မထင်တာကတော့ … အကောင်ထည်ဖော်ဖို့ .. လိုသေးတယ်လို့ ထင်ပါတယ် … ။ ကျောင်းသား တစ်ယောက်စီမှာ လက်တော့ပ်တစ်လုံးဆီပိုင်ဆိုင်ခဲ့မယ်ဆိုလျှင်တော့ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပေမဲ့ .. လတ်တလော… ကျောင်းသား လူဦးရေနဲ့ … ကွန်ပျူတာ အလုံးရေနဲ့ မညီမျှတာကြောင့်အလှမ်းဝေးတယ်လို့ ထင်ပါတယ် … ။ ကျောင်းတကျောင်းက ကျောင်းသား တစ်ဝက်စာ ပဲ ကွန်ပျူတာ အလုံးရေ ရှိစေဦးတော့ … ကျောင်းသား အားလုံး အသုံးပြုနိုင်ရန် အချိန် နှစ်ဆ စောင့်ဆိုင်းရပါတယ် … ။
သဘောက .. စာသင်ခန်းအတွင်း သင်ကြားနိုင်တဲ့ ဘာသာ ရပ်တွေကို အခန်းအားလုံး တပြိုင်နက် သင်ဦးတော့ … အဆင်ပြေပေမယ့် … ကွန်ပျူတာလို … ပစ္စည်းမျိုးကတော့ … လက်တွေ့မပါပဲ … သင်ပြဖို့ ခက်ခဲပါတယ် … ဒါ့ပြင် ထိတွေ့အားနည်းတဲ့ အခါ ..သင်တဲ့ အချိန် သာ ပုပ်ပြီး .. အလကား ဖြစ်တတ်ပါတယ် … ။ ကျွန်မတို့ ကျောင်းတတ်တုံးကလည်း … မာဒီမီဒီယာ အချိန် ပါခဲ့တာပဲ ..တ ပတ်ကို နှစ်ရက်လေ… ဆရာမပြောတာ ကိုယ်မသိ .. ကိုယ်ပြန်မေးချင်တာ .. ဆရာမမသိ နဲ့ …. အလကား အချိန်ဖြုန်းခဲ့မိတယ် .. ။
အခုခေတ်မှာ ..သူများယောင်လို့ .. ကွန်ပျူတာ သင်တန်း လျှောက်တတ်ကြတဲ့ လူတွေ တစ်ပုံကြီး .. သင်တန်းပြီးသွားလို့ အသုံးမပြုတဲ့ အခါ .. မေ့သွားကြတာပဲလေ … ။ လုပ်ငန်းခွင်ဝင်မယ်ဆိုမှ .. တခါပြန်စသင် … အဲ့ဒီလိုကြီးကို ဖြစ်နေတော့တာ … ။
တကယ် ကလေးတွေအပေါ် စေတနာရှိတယ်ဆိုလျှင် .. နွေရာသီကျောင်းပိတ်ရက်လိုမျိုးမှာ … အဖိုးအခ အသက်သာဆုံး (စာရွက်စာတမ်းဖိုးလောက်သာ ပေးရမဲ့ .. ) ရက်ရှည် …ကွန်ပျူတာ သင်တန်းလိုမျိုးတွေ ဖွင့်ပေးသင့်တာပါ … ။ ကွန်ပျူတာတွေတော့ … အစိုးရက ကျောင်းတွေကို စပွန်ဆာပေးပေါ့ … ။
အခြေခံကျတဲ့သင်ရိုးညွှန်းတမ်းတွေကို အမှန်တကယ်အဆင့်မြင့်အောင် ပြင်ဆင်သင်ကြားမယ်ဆိုရင်တော့ ကြိုဆိုရမှာပါ။ စာအုပ်ထဲမှာဘဲရှိပီးလက်တွေ့နဲ့ အလှမ်းဝေးနေမှာမျိုးတော့ ထပ်မလုပ်သင့်တော့ဘူး။ မီဒီယာရွမ်းတွေကို ပြတိုက်လိုသဘောထားပီးကြည့်နေရတဲ့အဖြစ်မျိုး ကျွန်မတက်ခဲ့တဲ့ တက်ကသိုလ်ကျောင်းတော်မှာတောင် ရှိနေသေးလို့ပါ။
အမြန်နိုင်ဆုံးအကောင်အထည်ပေါ် ပါစေ ၊
၂၀၁၂ လား? ၂၀၂၁လား?
၁၀နှစ်လောက်နောက်ကျနေတဲ့.. လက်ပ်တော့အဟောင်းတလုံး.. ယန်း၁သောင်းလောက်နဲ့.. အဟောင်းတွေ ဂျပန်ကသွင်းလို့ရနိုင်ပါတယ်..။
ဂျပန်အစိုးရဆီ အကူအညီတောင်းရင်.. အလကားတောင်ပေးဦးမှာ..။ အဲဒါတွေကို.. ကလေးတွေပေးသုံးလိုက်ဖို့ကောင်းတာပေါ့.. နောက် အနှစ်၂၀ဆို.. မြန်မာပြည်အခြေအနေတော်တော်ကောင်းသွားမယ်..။
ဒါဆိုရင် ၂၀၂၁ က နီးစပ်တယ်နော် အန်တီ kai
” အန်တီ kai ”
သေစမ်း သူကြီးရေ …
အန်တီခိုင် ဆိုပဲ ……
သဂျီးက သူ့နာမည်ကို kai လို့ပေးထားတော့ … ယောကျာ်းနာမည် လိုလို .. မိန်းမနာမည်လိုလိုဖြစ်တော့တာပေ့ါ … kaiကို ကိုရီးယားအသံနဲ့ဆိုလျှင် ကိုင်းလို့ ထွက်မယ့်ထင်ပါရဲ့ …
ဂျပန် နံမည် လို့ထင်ပါတယ် ။
အခြေခံပညာအဆင့်မှာ ကွန်ပျူတာဘာသာကို သင်ရိုးထဲမှာ ထည့်သင်ပေးမယ်.. ဆိုတာကတော့ ကောင်းတယ်လို့တော့ထင်ပါတယ်… ဒါပေမယ့် ထင်သလောက် ပြောရတာလွယ်သလောက် လုပ်ရမှာတော့ တော်တော်ခက်မယ်ထင်တယ်… ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့
ကျောင်းသားတွေရဲ့ အင်္ဂလိပ်စာ အခြေခံ၊ တို့က အဓိကကျမယ်ထင်ပါတယ်။
စက်ပိုင်းဆိုရင် အခုလက်ရှိ မာတီမီဒီယာတွေက ၁၉၉၇ ၀န်းကျင်မှာ ဖွင့်ထားတော့ စက်အခြေအနေကို စဉ်းစားရမယ်။ စက်တွေရဖို့ ပိုက်ဆံက စကားပြောလာပြီ မိဘဆီကလည်း ကောက်မလား။ မိဘ၀န်ပိလာနိုင်တယ်။ တချို့ဆို ကျောင်းတွေက လိုအပ်ချက်တွေရှိနေချိန်မှာ အဲဒီကွန်ပျူတာအတွက်နဲ့ လိုအပ်တဲ့နေရာတွေမှာ မသုံးနိုင်တဲ့ အခြေအနေတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်။
သင်ပေးမယ့်ဆရာပိုင်းမှာလည်း ဆရာတွေကို သေချာ သင်တန်းပေးမှ ရပါမယ်။ စာစီစာရိုက် လုပ်တက်ရုံနဲ့ ကွန်ပျူတာကျွမ်းကျင်တာ မဟုတ်ပါဘူး။ ကွန်ပျူတာသုံးတတ်တဲ့ လူရယ်လို့တောင် ခေါ်လို့မရတဲ့လူတွေ ကွန်ပျူတာရှေ့မှာ ထိုင်သုံးနေတဲ့ လူတွေရှိပါတယ်။
ကျောင်းသားတွေရဲ့ အင်္ဂလိပ်စာပိုင်းလည်း လိုအပ်ပါတယ်။ ကွန်ပျူတာဆိုကတည်းကိုက အင်္ဂလိပ် စာလုံးကို စသုံးနေပြီဆိုတော့ စက်ထဲမှာပါတယ် အလုပ်လုပ်ပုံတွေ စက်ပစ္စည်းတွေဟာ အင်္ဂလိပ်လိုတွေပါပဲ။ မြန်မာစာစနစ်ပြောင်းတယ် ဆိုတာလဲ အလုံးစုံ အဆင်ပြေတဲ့ အခြေအနေမှာ ရှိတာမဟုတ်ပါဘူး။ နောက်ပိုင်း ၀င်းဒိုး8 မှာ မြန်မာစာပါလာမယ်လို့တော့ ဆိုတာပါပဲ။ မထွက်သေးတော့ သေချာမသိသေးဘူးပေါ့။
သင်ရိုးထဲမှာ ပါမယ်။ ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့ ကွန်ပျူတာကို နားလည်မယ်ဆိုတာကိုတော့ ကြိုဆိုပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ၂၀၁၂ ဆိုတာကတော့ စောတယ်လို့တော့ယူဆပါတယ်။ မဟုတ်ရင်တော့ ပျက်ရယ်ပြုတာပဲခံရနိုင်ပါတယ်။
သည် post လေးနဲ့ပါတ်သက်ပြီး comment ပေးကြတဲ့ ရွာသားတွေ၊ ကျုပ်တို့ကလေးတွေရှေ့ရေး နဲ့ နောင် အနာဂတ်တိုင်းပြည်အရေးမျှော်တွေးပြီးအလေးနက်ပြုကြလို့အရမ်းဝမ်းသာရပါတယ်၊တစ်ချိန် မှာကျုပ်တို့ဘ၀တွေ သူတို့လေးတွေရဲ့လက်ထဲမှာ ရှိကြရမှာပါ၊ ဒါကြောင့် ယ္ခု ကျုပ်တို့ အပါအ၀င် တစ် နိုင်ငံလုံး၊ ကဗ္ဘာ့ နောက်တန်းကျနေရတဲ့ ဘ၀၊သူများ ပြု မှ နု ကြရ တဲ့ ဘ၀မျိုးတွေက လွတ်အောင်ကျုပ် တို့ခေတ်မှာ သူတို့ ကလေးတွေကိုအပါဆွဲ ခေါ်ကြရပါမယ်၊ နိုင်ငံတစ်ကာနဲ့ရင်ဘောင် တန်းနိုင် အောင် လုပ်ရပါမယ်၊ အချို့ပိုက်ဆံရှိလို့ နိုင်ငံတစ်ကာမှာအဆင့်မြင့်ကျောင်းတွေ တက်နိုင်သော်လည်း၊အဲသည်လို လူအ များစု ဟာ နိုင်ငံရပ်ခြား မှာ ပဲသူတို့ဘ၀ကိုပေးဆပ်နေကြတာများပါတယ်၊ ဒါတွေဟာလည်း ကျုပ်တို့တိုင်း ပြည်ရဲ့ရှေးမဆွက မှား ယွင်း ခဲ့တဲ့ Policy ကြောင့်ဖြစ်ရသလို၊ ဆင်းရဲတဲ့တိုင်းပြည်မှာဝင် ငွေ မကောင်းတော့သူ တို့တတ် တဲ့ပညာ နဲ့သူတို့ဘ၀၊ သူတို့ကလေးတွေရဲ့ရှေ့ရေး ကိုသာကြည့်ခဲ့မိ ကြ တာဖြစ်နိုင်ပါတယ်၊ ဒါ လူ့သဘာဝ အပေါ် အခြေခံတာ ဆို တော့ ba gyi အပြစ်မပြောလိုပါ၊ ကိုယ့် အတတ်ပညာကို တန်ဘိုး ထားတာလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်၊ ကဗ္ဘာ့ အနုမြူ ပညာရှင် ( one to teen) အဆင့်ထဲမှာ ကျုပ်တို့ မြန်မာ နိုင် ငံသားတစ်ယောက် တောင် ဂုဏ်ယူဘွယ်ရာ ပါတယ်လို့ကြား သိရ တယ် – ခုတော့ သူ ကျုပ်တို့ နိုင် ငံသား မဟုတ် တော့ပါဘူး၊ အဲသည်အခြေအနေတွေကြောင့် ၊ သည်သတင်းဟာ သာမန် ပါးစပ် သတင်း ဖြစ်သော်လည်း၊ ကောလဟလ တွေ တစ်ကယ်ဖြစ်လာတာများတတ်တဲ့ သည် တိုင်းပြည်မှာ- တစ်ကယ်ကောင်းတဲ့ကိစ္စ မို့လို့ တစ်ကယ်ဖြစ်လာအောင် ၊၀ိုင်းတိုက်တွန်းကြစေလိုလို့
တင်ပြရပါသည်။ etone နှင့် chaplet တို့ရဲ့ အသေးစိတ်တင်ပြချက်များအလွန်ကောင်းပါသည်၊ အခြားရွာ သား များရဲ့ အကြံပြုချက်များနှင့်တစ်ကွ အားလုံးသော လုပ်ဆောင်ရန်များကို — ကိုင်း သက်ဆိုင်ရာ
၀န်ကြီး ရေ အရေးတစ်ယူနှင့် ဖေးကူပါအုန်းဗျား။ နောက် ကျုပ်တို့နိုင်ငံ အကြွေး မထူရအောင်လို့ပါ။
တောင်းပန်ပါတယ်ဆရာ kai သားကအသစ်ဆိုတော့..
နောက်မှ ဆရာ Post တွေဖတ်မိတော့……
မီးကပျက်သွားလိုပါ EPC ကိုဖုန်းဆက်ကြည့်တော့…
သူများလုပ်လို့ လုပ်ရမယ် မဆိုလိုပါ ..
တခြားနိုင်ငံတွေမှာ ကလေးတွေ ကွန်ပြူတာ သုံးနေတာ တွေ့ရတော့
အမိနိုင်ငံလဲ တိုးတက်စေချင် ၊ ဖြစ်စေချင်ပါတယ် ..
တော်တော်လေး ကြိုးစားရမယ့် ကိစ္စပါ ။
မြန်မြန် သင်ကြားနိုင်ပါစေ … ။
သည် post နဲ့ပါတ်သက်လို့ အပြောသတင်းလေးပေါ်အခြေခံပြီး ရေးကြ၊အကြံပြုကြတာတွေအတွက် post နှင့် comment များကို လက်ခံတင်ပေးသော mandalay gazette မှ တာဝန်ရှိသူများနှင့် admin အဖွဲ့ကို အထူးကျေးဇူးတင်ရပါသည်၊ သည် post အတွက် တစ်အားဖြစ်စေမည့်– တရားဝင်ထုတ် မြန်မာ့သ တင်း စာနယ် ဇင်းတစ်စောင်ဖြစ်တဲ့ POPULAR NEWS (6. 10. 2011) ရက် ထုတ်စာစောင်၏ — ၊
Education သတင်းကဏ္ဍ တွင်-
အခြေခံပညာကျောင်းများတွင်- နွေကျောင်းပိတ်ရက် အင်တာနက် အခမဲ့သင်ပေးမည်။ ဟူသော ခေါင်းစဉ် ဖြင့် အောက်ပါအတိုင်း ၀မ်းမြောက်စရာဖေါ်ပြထားပါသည် ခင်ဗျား။ အကျဉ်းချုံးပြီးဖေါ်ပြပါမည်၊
အခြေခံပညာကျောင်းများမှ ဆရာဆရာမ နှင့်ကျောင်းသူ/သား များ အင်တာနက်အသုံးပြုနိုင်ရေးကို (အခမဲ့) ယ္ခုနှစ်နွေတွင်စသင်ပေးမည့်အကြောင်း၊ ကွန်ပြူတာအသင်းချုပ်ဥက္ကဌ ဦးအောင်ဇော်မြင့် မှပြောကြားကြောင်း၊ အခြေခံပညာကျောင်းအားလုံးတွင်( 2013- 2014 ) မှစပြီး ကွန်ပျူတာဘာသာရပ်ကို
ပူးတွဲသင်ရိုးအဖြစ်ပြဌာန်းရန် ဆောင်ရွက်နေပြီဖြစ်ကြောင်း ၊ ပညာရေး ဒုဝန်ကြီး ဦးအေးကြူ မှ ကွန်ပြူတာ
ဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီအစည်းဝေးတွင်ပြောဆိုခဲ့ကြောင်းပါဗျား။ ရွာသားများဆက်လက် အကြံပြုကြပါအုန်းခင်ဗျား၊ကျုပ်တို့ ပညာရေး သိပ်မဝေးတော့ပါကြောင်း။